NYI LYNN SECK 18+ DEN: February 2010
အနှစ်ချုပ် မြန်မာ့သမိုင်း အဘိဓာန် ပထမတွဲ
တန်ဖိုး ၆၀၀၀ ကျပ်
ကိုလေး၊ ဦး (ပန်းချီ)
ကောင်း၊ ဦး (ကင်းဝန်မင်းကြီး)
ကောင်း၊ ဦး (ပညာမင်းကြီး)
ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
ကျဘမ်း၊ မောင်၊ ခုံတှော
ကြာညွန့်၊ ဦး (ပန်းချီတှော)
ကြီး၊ ဦး (ရတနာကြေးမုံ)
ကြီး၊ ဦး (လွမ်းချင်း)
ကြီး၊ ဦး (ဝန်စာရေး)
ကျှောဆန်း၊ ဦး (ကာတွန်း)
ကျှောထင်၊ ဦး (သူရ -)
ကျှောထွန်း၊ ဦး (ကဝိမျက်မှန်)
ကျှောမင်း၊ ဦး (အိုင်စီအက်စ်)
ကျှောရင်၊ ဦး၊ ပုပဿပါး
ကျှောရင်၊ ဦး (ပါမောကဿခချုပ်)
ကျှောဝင်း (ရဲနီ -)
ခင်၊ မောင်၊ ဆာ
ခင်စု၊ ဒှေါ (ရေနံမြေ)
ခင်မင်၊ မောင် (ဓနုဖြူ)
ခင်မောင်၊ ဦး (သူကြီးဂေဇက်)
ခင်လှ၊ ဒှေါ (ဝဏဿဏကျှောထင်)
ခင်အုန်းမြ၊ ဒှေါ၊ ဗိုလ်မှူး
ခနဿတီ၊ ဦး (ရသေ့ကြီး -)
ချို၊ ဦး (ပညာမင်းကြီး -)
ချစ်မောင်၊ သခင်၊ ဝိဓူရ
ချစ်မောင်၊ သခင် (မြန်အောင်)
ချစ်မောင်၊ ဦး၊ ဂျာနယ်ကျှော
ချစ်လှိုင်၊ ဦး (ကိုကိုမောင်ကြီး)
ချစ်လှိုင်၊ ဦး (အငြိမ်းစားရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်)
ချမ်းသာ၊ ဦး (လက်ဝဲမင်းညို)
ချုံ၊ ဆရာ (ပန်းချီတှော)
ငုံ၊ ဦး (ပုသိမ်မြို့ဝန်)
ငွေကိုင်၊ ဦး (ပန်းချီ)
စာပေဗိမာန် စာပေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲများ
စီ၊ ဦး (သံတှောဆင့်)
စု၊ ဒှေါ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမေ)
စု၊ ဦး (ဂျီစီဘီအေ)
စော၊ ဦး၊ ဂဠုန်
စောဒီထူး၊ ဦး (နိုင်ငံတှောကောင်စီဝင်)
စောနောင်၊ ဗိုလ် (ရဲဘှောသုံးကျိပ်)
စောဖြူ၊ သူရ၊ ဗိုလ်ချုပ်
စံထွား၊ ဦး (ဝဏဿဏကျှောထင်)
စံမြင့်၊ သခင် (ဗိုလ်ရန်နောင်)
စံသာအောင်၊ ဦး (ညွှန်ချုပ်)
စန်း၊ ဒှေါ၊ အင်ဒီပန်းဒင့်
စန်းငွေ၊ ဦး၊ ဒဂုန်
စန်းယု၊ ဦး (သမဿမတ)
စိန်လွင်၊ ဦး (သမဿမတ)
စိန်ဝင်း၊ ဦး (ဝန်ကြီးချုပ်)
စိမ်း၊ ဦး၊ မြန်မာ့အလင်း
ဆောင်၊ ဆရာ (ပန်းချီ)
ဆန်းထွန်း၊ ဦး (မန်းတကဿကသိုလ်)
ဇဝန၊ ဦး (ဆရာတှော)
ဇန်ထားဆင်၊ ဦး (ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး)
ဇှောဝိတ်၊ ဦး (ကာယဗလ)
ဉာဏဝရ၊ ရှင် (ပထမကျှောအောင်စံထား)
တီကလစ်၊ သူရ၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်
တင်၊ ဆရာ၊ နန်းတှောရှေ့
တင်၊ ဆရာ၊ ဝိုင်အမ်ဘီ
တင်၊ ဆရာ၊ သဟာယ
တင်၊ ဦး၊ ပုဂံဝန်ထောက်
တင်၊ ဦး၊ မြန်မာ့အလင်း
တင်ညွန့်၊ ဦး (အလုပ်သမားဝန်ကြီး)
တင်ရှိန်၊ ဗိုလ် (ပီကင်းပြန်)
တင်ဧ၊ ဦး (ရှမ်းပြည်နယ်)
တင်အုံး၊ ဦး (ပါမောကဿခ)
ထားကြီး၊ သခင် (ရေနံမြေ)
ထွန်းညို၊ ဦး (တွင်းသင်းတိုက်ဝန်)
ထွန်းဖေ၊ ဦး (ထွန်းနေ့စဉ်)
ထွန်းမြင့်၊ ဦး၊ ဒဂုန်
ထွန်းမြင့်၊ ဦး (လင်းခေး)
ထွန်းမြိုင်၊ ဦး (ဇေယျကျှောထင်)
ထွန်းမြတ်၊ ဦး (နိုင်ငံတှောကောင်စီဝင်)
ထွန်းရင်၊ ဦး (မနဿတလေးသူရိယ)
ထွန်းရွှေ၊ ဦး (ကဗျာ့စွယ်စုံ)
ထွန်းအေး၊ ဦး (နဂါးနီ)
ထွန်းအုပ်၊ သခင် (ရဲဘှောသုံးကျိပ်)
နု၊ ဦး (ဝန်ကြီးချုပ်)
ပဏဿဍိတာဘိဝံသ၊ ဦး (ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတှော)
ပိန်၊ ဦး (မြို့စာရေး)
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေး တကဿကသိုလ်
ပြုံးချို၊ ဦး (မဟာဂီတ)
ပှေါထွန်း၊ ဆာ (နန်းရင်းဝန်ဟောင်း)
ဖီး၊ ဆရာ၊ ကျပင်း
ဖေ၊ ဦး (သီရိစတုရဂဿငဗလ)
ဖေခင်၊ ဦး (မဟာသရေစည်သူ)
ဖိုးစိန်၊ ဦး၊ ဝဇီရဗုဒဿဓိ
ဖိုက်၊ အဲလဗတ်၊ ဆာ
ဖယ်ယာ၊ အာသာ၊ ဆာ
ဖြိုး၊ ဆရာ (ပညာအလင်းပြ)
ဘတင်၊ ဦး၊ ဒဂုဏ်ပ
မှိုင်း၊ ကိုယ်တှော၊ သခင်
သင်၊ ဆရာ၊ ဆင်ဖြူကျွန်း
သိန်း၊ မောင်၊ ဇာတိပဿဖိုလ်
ဒီနေ့ (ဦး)သန်းဝင်းလှိုင်ရဲ့ အနှစ်ချုပ် မြန်မာ့သမိုင်း အဘိဓာန် ပထမတွဲ ဆိုတာကို ဝယ်ဖတ်ဖြစ်ပာတယ်။ ဒာ့အရင်က (ဦး)သန်းဝင်းလှိုင်ရဲ့ ၂၀ရာစု မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြောပြနေသော နေ့ရက်များ စာအုပ်ကို တှောတှောလေး သဘောကျမိပာတယ်။ နောက်တစ်အုပ် အကျှောဇေယျ စာဆိုတှောများ စာအုပ်မှာတော့ စာအုပ်နာမည်ကစလို့ အချို့မွေးနေ့တွေ၊ တချို့ အချက်အလက်တွေ မှားနေတာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဘဝင်မကျ ဖြစ်ခဲ့ပာတယ်။ ဒာပေမယ့် စာစီသမား အမှားကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တာမို့ ဖြေတွေးခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခာ ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ကတော့ ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်တဲ့အခာ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အသစ်တွေ အများကြီးပာသလို ထင်ရတာမို့ ကိုယ်ကလည်း သမိုင်းတွေ အတဿထုပဿပတဿတိတွေ စိတ်ဝင်စားသူမို့ ဝယ်ဖတ်ကြည့်မိ ပြန်ပာတယ်။ ဖတ်နေရင်း ဖတ်နေရင်းက တချို့စာတွေကို အရင်က ဖတ်ဖူးသလိုလို သံသယ ရှိလာတာမို့ သေသေချာချာ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ အခာမှာတော့ ပြသဿသနာတွေ ထွက်ကျ လာပာတော့တယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ လူပုဂဿဂိုလ် ၃၁၃ ယောက် အကြောင်းနဲ့၊ အခြားအကြောင်းအရာ ၁၁၄ ခု ပာဝင်ပာတယ်။ စာမျက်နှာ ၇၇၈ မျက်နှာ ရှိတယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့က ဒုဥကဿကဋဿဌ ဦးစိုင်းထွန်းအောင်နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်တင်မြတို့က အမှာစာရေးပြီး ချီးကျူးထားကြပာတယ်။
စာအုပ်မှာ ပထမဆုံး တွေ့ရတဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ Bibliography ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မပာတာပာပဲ။ တချို့စာတွေက Footnote အနေနဲ့ ပာတယ်။ တချို့စာတွေက ဘယ်ကနေ မှီငြမ်းထားမှန်း မသိရဘူး။ (ဥပမာ- တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ၁၃၅မျိုး) နောက်တစ်ခုက သူများစာအုပ်ထဲက စာတွေကို သည်၊က၊မှာ၊ကို၊အား အနည်းအများ ဖြည့်စွက် ပြောင်းလဲပြီး သုံးထားတာပာ။ (ဥပမာ- ဆင်ဖြူကျွန်းဆရာသင်၊ မြန်မာစာရေးဆရာ အဘိဓာန်၊ ဒု၊ မလိခ) တိုက်ဆိုင်ဖတ်ကြည့်ရင် သိသာပာတယ်။ တချို့စာတွေမှာတော့ မူရင်းကနေ အစအဆုံးလည်း ကူးယူသလို တချို့ လိုနေတဲ့ အချက်တွေကို ထပ်ဖြည့်တာမျိုးပာ။ (ဥပမာ- ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း၊ မြန်မာစာရေးဆရာ အဘိဓာန်၊ ဒု၊ မလိခ) နောက်တစ်မျိုးက မူရင်းစာထဲက မလိုအပ်တဲ့ အချက်တွေကို ဖျက်ထုတ်ပြီး ကိုယ်ယူချင်တဲ့ စာသားတွေကိုပဲ မူရင်းအတိုင်း အပိုဒ်လိုက် ကူးထည့်တာပာ။ (ဥပမာ- ဒှောနှင်းမြ၊ မြန်မာအမျိုးသမီး၊ စောမုံညင်း) အဆိုးဆုံး အချက်ကတော့ သူများစာအုပ်ထဲက စာတွေကို တစ်ပုဒ်လုံး ကူးယူထားတာပာပဲ။ ဘယ်အထဲကနေ အများဆုံး ကူးထားသလဲဆိုတော့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းထဲက ယူပာတယ်။ (ဥပမာ- ကင်း၊ တှောစိန်ခို၊ ကံရာဇာကြီး၊ ဆာစံစီပိုး၊ စောစံဖိုးသင်၊ ဦးစိန်ဝင်း၊ စဝ်ထွန်းဧ) အများကြီးပာပဲ။ ဒာကတော့ ကျွန်တှော့မှာ ရှိထားတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်ကြည့်လို့ သိရတဲ့ အထဲက အနည်းအကျဉ်းပာ။
ဒီစာအုပ်ထဲက အချို့စာတွေကတော့ ကိုးကား နေရာမှာ မဂဿဂဇင်းတွေ၊ စာစောင်တွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားသား ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေ ထည့်သွင်းထားတာလည်း တွေ့ရပာတယ်။ တချို့စာတွေမှာတော့ ကိုးကားထားတဲ့ စာတွေမှာ မပာဝင်တဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေတွေကို စာရေးသူက ဆက်လက်ရှာဖွေပြီး ထည့်သွင်းပေး ထားတာမျိုး အားစိုက်ထည့် ထားတာကိုတော့ တွေ့ရပာတယ်။ တချို့ဟာတွေမှာ လူပုဂဿဂိုလ်ကို တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားတယ်လို့ သိရပာတယ်။ တချို့စာတွေဆို အကိုးအကား အများအပြား Footnote မှာ ပြထားတာကို တွေ့ရပာတယ်။ အဲဒာတွေကတော့ ကျွန်တှော့ဆီမှာ မရှိလို့ တိုက်ဆိုင် မစစ်ဆေးနိုင်ပာဘူး။ ကိုးကားထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို တိုက်ရိုက် မကူးယူဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်လည် ပြုစုထားတယ် ဆိုရင်တော့ အလွန်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်မှာပာ။
ဆိုတော့ကာ.. စာရေးသူက ဒီစာအုပ်ဟာ ရည်ညွှန်းကျမ်းဝင် စာအုပ်လို့ အမှာစာမှာ ဆိုထားပာတယ်။ ဒီလို သူများရဲ့ စာအုပ်ထဲက စာတွေကို တှောတှောများများကို ကူးယူပြီး “စု” ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ဟာ ရည်ညွှန်းစာအုပ် ဖြစ်သင့်ရဲ့လားလို့ ကျွန်တှော စဉ်းစားနေမိတယ်။ ပြီးတော့ တကယ်လို့သာ ကျမ်းပြုမယ့်သူ တစ်ယောက်က ဒီစာအုပ်ကို ကိုးကားမယ်ဆိုရင် အခုနကလို သူများဆီက စာတွေကို ယူထည့်ထားတဲ့အတွက် မူရင်းစာအုပ်ကို ညွှန်းဆိုရမှာလား၊ ဒီစာအုပ်ကိုပဲ ညွှန်းဆိုရမှာလား ဆိုတာ ပြသဿသနာ ရှိလာနိုင်ပာတယ်။
ဝီကီပီးဒီးယားမှာ “Plagiarism is the use or close imitation of the language and thoughts of another author and the representation of them as one's own original work." လို့ ဖှောပြထားတာ တွေ့ရပာတယ်။ Merriam-Webster Online Dictionary မှာတော့
လို့ ဖွင့်ဆိုပာတယ်။ Plagiarism.Org မှာလည်း
အထက်ကလို ရေးထားတာမို့ သူများရေးထားတာကို ကိုယ်ရေးတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်လို့ မရဘူးလို့ သိရပာတယ်။ တကယ်လို့သာ သူများစာကို အပိုဒ်လိုက် ကူးယူမယ် ဆိုရင်လည်း(“…..”) မျက်တောင် အဖွင့်အပိတ် သကေဿငတနဲ့ ဖှောပြဖို့ လိုအပ်ပာတယ်။ အောက်ဆုံး အချက်ကတော့ အရေးအကြီးဆုံးလို့ ထင်ပာတယ်။ ကိုယ် ကိုးကားတဲ့ သူများစာ၊ အယူအဆဟာ ကိုယ်ရေးထားတာထက် ပိုများနေရင်လည်း Plagiarism မှာ အကြုံးဝင်တယ်လို့ သိရပာတယ်။ ကိုးကားတယ်လို့ ဆိုရာမှာလည်း အကန့်အသတ် ရှိပာတယ်။ စာကြောင်းရေ ဘယ်နှစ်ကြောင်း၊ စာလုံးရေ ဘယ်နှစ်လုံးဆိုပြီး ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိပာသေးတယ်။ တကယ်လို့ မူရင်းစာကို အတိအကျ ယူချင်တယ် ဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ Copyright ပိုင်ရှင်ဆီကနေ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် ရယူဖို့ လိုပာတယ်။ ဒာကို စာဖတ်သူတွေ သိဖို့လည်း လိုအပ်ပာတယ်။ (ဦး)သန်းဝင်းလှိုင် အနေနဲ့ ဒီကိစဿစကို ထည့်သွင်း မဖှောပြထားတာမို့ တရားဝင် ယူသုံးတာလား၊ နားလည်မှုနဲ့လား၊ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တှော မသိပာဘူး။
ဒီနေရာမှာ ဆရာနတ်နွယ်နဲ့ ဆရာမင်းကျှော ပူးတွဲပြီး မလိခ အမည်နဲ့ ပြုစုခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာစာပေအဘိဓာန်၊ မြန်မာဝတဿထုအညွှန်း စာအုပ်တွေကို သတိရမိပာတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့ဟာ အခြားသော စာအုပ်ပောင်း များစွာကို ဖတ်ရှုပြီးမှ ကိုယ့်မူအတိုင်း ပြန်လည် ရေးသားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပာတယ်။ သူများရေးထားတာကို ကူးယူထားတာမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့စာဟာ အထက်ကလို ပြသဿသနာတွေ ကင်းရှင်းရုံကမ ဖတ်ရတဲ့သူ အတွက်လည်း အသစ်ဖြစ်လို့ နေပာတယ်။ အခုကျတော့ အချို့စာတွေဟာ ကိုယ်တိုင် သုတေသနပြု ရေးသားထားတယ်လို့ ထင်စရာ ရှိပေမယ့် အခြားစာအုပ်တွေကနေ အစအဆုံး ကူးယူထားတဲ့ စာတွေလည်း ပာနေတာမို့ သံသယပွားစရာ ဖြစ်လာပာတယ်။ ဒီအထဲမှာ ထူးခြားတာ တစ်ခုကိုလည်း သတိထားမိပာသေးတယ်။ အဲဒာကတော့ ကိုးကားစာရင်းမှာ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနရုံးချုပ် ကနေ ထုတ်ဝေတဲ့ နှစ်ဆယ်ရာစု မြန်မာစာရေးဆရာများနှင့် စာစုစာရင်း အတွဲတွေကို မတွေ့ရတာပာပဲ။ ပြသဿသနာ တက်နိုင်တာမို့ သူတို့ဆီကဟာ မယူတာများလားလို့ တွေးမိပာတယ်။ ဦးစိုင်းအောင်ထွန်းနဲ့ သခင်တင်မြ အမှာရေး ချီးကျူးထားတာကိုလည်း အထက်က ကိစဿစတွေကြောင့် အံ့အားသင့်မိပာတယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ မူရင်းစာတွေကို မဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေ၊ အချက်အလက်တွေကို တစ်စုတစ်ဝေးထဲ သိမ်းထားချင်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ရောင်းဈေးနဲ့ တန်တဲ့ စာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ်ပာ။ ဒာပေမယ့် စာဖတ်နာသူတွေ စာအုပ်ပိုင်ရှင်တွေ အတွက်ကတော့ ကျွန်တှော့လိုပဲ တစ်ခုခုကို ဘဝင်မကျတာမျိုး ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပာတယ်။ စာအုပ်တွေစုပြီး ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ရွေးပြီး ပြန်ထုတ်တာဟာ စာအုပ်ပြုစုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပာတယ်။ ပညာသင်သား သောတုဇန ပုဂဿဂိုလ်များ အတွက်လည်း အချက်အလက်ရပေမယ့် Bibliography သွင်းတဲ့နေရာမှာ စိတ်ဒွိဟ ဖြစ်စေပာလိမ့်မယ်။
ဦးသန်းဝင်းနိုင်သာ အဲဒာတွေ အားလုံးကို ကိုယ်တိုင် ပြန်သုတေသနလုပ် ရေးသားမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ကောင်းမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်ပာပဲ။ ဒီလိုသာ သူများဟာတွေစုပြီး ထုတ်မယ် ထုတ်ဝေသူလည်း ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် စာအုပ်စုတဲ့ လူတိုင်းနီးပား စာရေးဆရာ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ ရှိပာတယ်။ ဒီစာအုပ်ကလည်း ပထမတွဲလို့ ဆိုထားတော့ နောက်လည်း အတွဲတွေ ဆက်ထွက်လာဖို့ ရှိမယ့် သဘောပာပဲ။ အဲဒီအတွဲတွေလည်း ဒီစာအုပ်လိုသာ ဆိုရင်ဖြင့် တှောတှော စိတ်ပျက်မိနိုင်ပာတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအထဲက စာတွေအားလုံးက မူရင်းစာရေးသူ အားလုံးနဲ့ သဘောတူ ညှိနှိုင်းထားပြီးသား၊ ခွင့်ပြုချက် ရပြီးသားဆိုရင်တောင် အဲဒာကို စာဖတ်သူတွေ သိအောင် အတိအလင်း စာအုပ်မှာ ကြေညာထား သင့်ပာတယ်။ အခု ကျွန်တှော ဝေဖန်တာလည်း သူတို့ကြားမှာ ဘယ်လို ညှိနှိုင်းထားပြီးသား ဆိုတာကို မသိရလို့ပာ။ ပြီးတော့ အခြားစာအုပ်ထဲက စာတွေ အများအပြား ကွက်တိပာနေတာမို့ ကိုယ်တိုင် ပြုစုရေးသားတာလို့ မကြေညာဘဲ သန်းဝင်းလှိုင် တည်းဖြတ်သည် အနေနဲ့သာ ထုတ်ရင်ဖြင့် ပိုသဘာဝကျမယ်လို့ ထင်မြင်မိပာတယ်။ ဗဟုသုတတွေ တအုံကြီး တစ်နေရာထဲမှာ စုစည်းပေးတာမျိုးကို ကျေးဇူးတင်ရပာတယ်။ ဒာပေမယ့် သူများဟာထက် ကိုယ်ပိုင် Creation တွေကိုလည်း မြင်တွေ့ချင်တဲ့ ဒီစာကို ရေးပာတယ်။
(ပထမတော့ ဒီစာကို မဂဿဂဇင်း တစ်ခုခုကို ပို့မလို့ပာပဲ။ ဒာပေမယ့် ကိုယ့်ကြောင့် ပြသဿသနာ နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်မှာ စိုးတာကြောင့် ဘလော့ပှောပဲ တင်လိုက်ပာတယ်)
မြန်မာစာပေအဘိဓာန် (၁၊၂၊၃၊ ၄)၊ မလိခ
ဂနဿထဝင်ပုဂဿဂိုလ်ကျှောများ အတဿထုပဿပတဿတိ၊ လှသမိန်
စာဆိုတှောများ အတဿထုပဿပတဿတိ၊ ဗိုလ်မှူးဘသောင်း
အနှစ်ချုပ် မြန်မာ့သမိုင်း အဘိဓာန် ဒုတိယတွဲ
Posted by NLS at 2/16/2010 10:20:00 AM 18 comments Links to this post
Labels: Book Review, Selection
Myanmar Blogger Survey 2009 is being featured on SlideShare Homepage
I do really proud for that and wanna say thank you all for those who participated in that. I haveaplan to take it every 6months. Hope to get more responses next time. The more responses can make the more accurate result!
Your presentation Myanmar Blogger Survey 2009 is currently being featured on the SlideShare homepage by our editorial team.
p.s. Why not blog/twitter this and let the world know about this awesome masterpiece you have created?
Posted by NLS at 2/04/2010 11:46:00 AM3comments Links to this post
Labels: Blog, News, Survey
View more presentations from lynnseck.
Posted by NLS at 2/03/2010 11:30:00 PM2comments Links to this post
Labels: Blog, Blogger, Information, Statistic, Survey
Myanmar Blogger Survey 2009 is being featured on S...